Study English in America (Information about WESLI in Burmese) | WESLI Study English in America (Information about WESLI in Burmese) – WESLI
初め - 上級レベル
Study English in America (Information about WESLI in Burmese)
SCHOOL PROFILE ကျောင်းသမိုင်းအကျဉ်း
WESLI (ウィスコンシン州の英語第二言語研究所) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အသင်းဝင် ဖြစ်သည့် CEA မှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ကာ ပြည်နယ်ဥပဒေနှင့်အညီ အမေရိကန်တွင် ကျောင်းတက်လိုသော ကျောင်းသားများကို သာ ၀င်ခွင့်ပြုသော ကျောင်းဖြစ်သည်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက WESLI ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ www.wesli.com တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လုံခြုံမှုရှိခြင်း၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ လှပခြင်း နှင့် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းခြင်း
WESLI သည် Wisconsinပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သော Madison မြို့၏ အချက်အချာကျသောနေရာတွင် တည်ရှိပြီး အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ Chicago မြို့မှ ကားဖြင့် နှစ်နာရီခွဲ၊ အနောက်ဘက်ရှိ Milwaukeeမှ ၁နာရီမောင်းရုံဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သော နေရာတွင်တည်ရှိသည်။ အမေရိကန်၏ အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသဖြစ်ပြီး နေထိုင်စားရိတ်နှင့် ကျောင်းစားရိတ်တို့မှာ အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတို့ထက် သက်သာသည်။
ထို့အပြင် ဒေသခံများအသုံးပြုသောစကားမှာ ကမ္ဘာသုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ WESLI သည် Wisconsin တက္ကသိုလ်အနီးတွင်တည်ရှိသည်။ Madisonရှိ လူဦးရေ၏ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကျောင်းသားများဖြစ်သည့်အတွက် Madison မြို့မှာ လုံခြုံရေးအဆင့်အတန်း အလွန်မြင့်မားသောမြို့ဖြစ်ပြီး အပန်းဖြေစရာနေရာများစွာလည်းရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်ကတည်းက မဂ္ဂဇင်းကြီးများတွင် Madisonမြို့ကို လုံခြုံစိတ်ချရပြီးလှပသော၊ ပညာရေးကောင်းမွန်သော၊ နေထိုင်စားရိတ်သက်သာသော၊ အပန်းဖြေစရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသော၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်သော နံပတ်၁မြို့အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ Madison မြို့မှာ ရေကန်ကြီး လေးကန်ဖြင့်အမှန်တကယ်သာယာလှပနေသော မြို့တမြို့ပင်ဖြစ်တော့သည်။
CLASSES & SCHEDULE: အတန်း နှင့် အချိန်စာရင်းများ
WESLI တွင် အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံအဆင့်မှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့်အဆင့်ထိ level ၈ခုခွဲပြီး သင်ကြားပေးနေပါသည်။ (WESLI ၏ သင်ရိုးနမူနာကို စာမျက်နှာ ၆တွင်လည်းကောင်း၊ ၀က်ဆိုက်ပေါ်ရှိ “ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်စာသင်နှစ်စာရင်း(current session course list)” တွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (သို့) ၀က်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
TEACHERS & STAFF: ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ၀န်ထမ်းများ
WESLI သည် မိသားစုကဲ့သို့ နွေးထွေးသောကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်စာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြိုးကြိုးစားစားသင်ယူနေကြသော ကျောင်းသားများက အကောင်းဆုံးထောက်ခံပေးနေပါသည်။ WESLI သည် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပြည့်နှက်နေသော်လည်း ၀န်ထမ်းများ၊ ဆရာများ၏ ပညာရေးတွင်သာမက လူမှုရေးပိုင်းတွင်ပါ ကူညီတတ်မှုများကြောင့် မိသားစုကဲ့သို့ နွေးထွေးသော ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ WESLI ၏ ပင်မဌာန အသင်းဝင် ဆရာကြီး/ဆရာမကြီး အများစုသည် များသောအားဖြင့် မဟာဘွဲ့ရများဖြစ်ပြီး ဘာသာစကားတစ်မျိုးထက် ပိုမိုတတ်ကျွမ်းကြသည်။
စာသင်သက်ရင့်သောသူများဖြစ်ပြီး WESLI တွင် ၁၅နှစ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူများလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်သည် WESLI ၏ တမူထူးခြားသော စိတ်ဓာတ်အင်အားများကို မြင်သာစေသည်။
အင်္ဂလိပ်စာ အထူးပြုသင်ကြားရေး အဆင့် ၈ ဆင့်
(အတန်းတစ်ချိန်လျှင် ၂နာရီနှုန်းဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် ၂ရက်မှ ၃ရက်အထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။)
OVERSEAS CONDITIONAL ADMISSION (FATHER): ပြည်ပကျောင်းသား ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့် (အိုစီအေ)
OCA သည် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း မပြည့်မီသေးသည့်ကျောင်းသားများအတွက် ၀င်ခွင့်ရရန်ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ WESLI ၏ 700 level Academic အတန်းကို အောင်မြင်သူများသည် တက္ကသိုလ်ဒုတိယပညာသင်နှစ်သို့ ၀င်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ WESLI မှ ထောက်ခံစာကို TOFEL အမှတ်စာရင်းအစား အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းကို ဖော်ပြရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
OCA ကို ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ ?
ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသော်လည်း WELSI သို့လာရောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့် ကျောင်းသားဗီဇာရရန် အလွန်ခက်ခဲ့သော နိုင်ငံများမှ ကျောင်းသားများ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိထားသော တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ကောလိပ်မှ ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့်စာတစ်စောင်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး WESLI မှ ထိုအချက်ကို ကျောင်းသား၏ I-20(ကျောင်းဝင်ခွင့်ဖိတ်ကြားလွှာ) ပေါ်တွင် ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
OCA ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ
OCA လျှောက်ထားရန် အချက်အလက်ပြည့်စုံသော(ပညာရေး ၊ ငွေကြေး စသည်) ကျောင်းသားများအတွက် WELSI မှ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များမှထံမှ အကူအညီရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
မိမိနှင့် သင့်တော်သော အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရှာဖွေလျှောက်ထားမလဲ
WESLI တွင် ကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မှ သင့်တော်သော တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ဖြည့်စွက်ခြင်း ၊ ကျောင်းလျှောက်ရန်လိုအပ်သောစာမေးပွဲများဖြေဆိုနိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်းတို့ကို ၀န်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ အခမဲ့ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ Wisconsin ရှိ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းအများစု နှင့် ဘွဲ့သင်တန်းအချို့တွင် WESLI၏ ထောက်ခံစာကို TOEFL အမှတ်စာရင်းအစား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီသောကျောင်းသားများကို WESLI မှ University of Wisconsin ၊ Edgewood College ၊ Lakeland College နှင့် Upper Iowa University တို့တွင် တက်ရောက်နိုင်ရန် ကူညီစီစဉ်ပေးမည်။
အခြားအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ – ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ အပြန်အလှန်စကားပြောဖော်များ၊ စသည် …
CONVERSATION PARTNERS: အပြန်အလှန်စကားပြောဖော်များ
WESLI ရှိ Activities Coordinator မှ ဘာသာစကားချင်း လေ့လာဖလှယ်လိုသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
နှစ်ပတ်ကြိုတင်ပြီး မိမိရောက်မည့်အချိန်နှင့် အခြားခရီးသွားအချက်အလက်များကို ပို့ပေးပါက Madison လေဆိပ်သို့လာကြိုပေးပြီး နေထိုင်မည့်အဆောင် သို့မဟုတ် ဒေသခံများနှင့်အတူနေမည်ဆိုပါက နေမည့် မိသားစုထံသို့ ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
WESLI တွင် ကွန်ပျူတာခန်းတစ်ခန်း၊ laptop ခန်းတစ်ခန်းနှင့် listening ခန်းတစ်ခန်း ထားရှိထားပြီး အိမ်စာလုပ်ရန် ကွန်ပျူတာနှင့် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် ကို ကြိုးဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကြိုးမဲ့ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
အခြား : WESLI မှ ၀န်ထမ်းများက immigration အတွက် အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း ၊ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း၊ ဆရာဝန်ရှာပေးခြင်း နှင့် အခြားပြဿနာများကို ကူညီပေးရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
RECREATIONAL AND CULTURAL အပန်းဖြေစရာများ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု
လှုပ်ရှားမှုများ ။ WESLI ရှိ Activities Coordinator မှ ပါတီပွဲများ၊ အပန်းဖြေစရာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများ နှင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်များကို စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းမြှင့်တင်လိုသူများအတွက်လည်း အတန်းချိန်ပြင်ပတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများကိုလည်း ကူညီရှာဖွေပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်များထဲမှ အချို့ကို အခမဲ့ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၀င်ကြေးပေးရသည့် အစီအစဉ်များလည်းရှိသည်။
HOUSING – Comfortable & Affordable သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး စားရိတ်နည်းသော အိမ်ရာများ
WESLI ရှိအဆောင် သို့မဟုတ် homestay (ဒေသခံအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း) ကို လက်ခံမည့် အမေရိကန်မိသားစုအိမ် အား WESLI ရှိ Housing Coordinator (အိမ်ယာစီမံရေးမှူး) မှ ရှာဖွေ စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ In shared housing (အိမ်တအိမ်တွင်ကျောင်းသားများစုပေါင်းနေထိုင်ခြင်း) အခြေအနေမျိုးတွင် အိမ်ယာစီမံရေးမှူးသည် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားများ အတူတကွနေထိုင်နိုင်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံးစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်စဉ်အတွင်းတွင်လည်း လိုအပ်သမျှကို ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆောင်နေခြင်း သို့မဟုတ် homestay (ဒေသခံအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း) နေခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်မှာ တူညီသလောက်ရှိပြီး မိမိရွေးချယ်သောနေရာတွင် ၂လအနည်းဆုံးနေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းလျှောက်လွှာရှိ ကုန်ကျစားရိတ်ဇယားတွင် လက်ရှိဈေးနှုန်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
WESLI ရှိအဆောင်ကို ၂၀၀၃ သြဂုတ်လတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆောင်တွင် ကျောင်းသား၎ယောက်အတွက်အခန်းနှစ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း နှစ်ခန်းထားပေးထားပြီး မီးဖိုဆောင်နှင့် ဧည့်ခန်းတစ်ခန်းထည့်သွင်းပေးထားသည်။ အဆောင်တွင် ကျောင်းသားများအတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ပရိဘောဂ၊ အိပ်ယာခင်းများ၊ ခေါင်းအုံးများ၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါများ၊ ပန်းကန် ခွက်ယောက်များ၊ မီးဖိုဆောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ တီဗီ၊ ဗီဒီယို ကတ်ဆက်ရီကော်ဒါ၊ ဒီဗီဒီစက်၊ စီဒီစက်၊ ဖုန်း နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ WESLI မှ တစ်ဘလောက်သာကွာဝေးပြီး အဆောင်အနီးတွင် ဈေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ နှင့် ပန်းခြံများလည်းရှိသည်။ အဆောင်လခတွင် အစားအသောက်စားရိတ်မပါဝင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်မချက်လိုဘဲ ဆိုင်မှ မှာယူစားသောက်လိုသူများအတွက်လည်း စားသောက်ဆိုင်များမှ မှာယူစားသောက်နိုင်ပါသည်။
HOMESTAY WITH AN AMERICAN FAMILY: အမေရိကန်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း
သင်နှင့်အတူနေထိုင်မည့် အမေရိကန်မိသားစုသည် ကလေးရှိသော သို့မဟုတ် ကလေးမရှိသော အိမ်ထောင်သည် မိသားစု သို့မဟုတ် တဦးတည်းသီးသန့်နေသူ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ သွားရောက်နေမည့်ကျောင်းသားအတွက် သီးသန့်အခန်းတစ်ခန်းထားရှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအိမ်အများစုမှာ WESLI မှာ ၃ကီလိုမီတာမှ ၁၀ကီလိုမီတာအတွင်းရှိကြသည်။ ဘတ်စ်ကားဖြင့် ၁၅မိနစ်မှ ၄၅ မိနစ်အတွင်း WESLI သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ မိသားစုအများစုမှာ အိမ်အတွင်းတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုကြပေ။ အစားအသောက်ကို များသောအားဖြင့် မိမိနေထိုင်သော အိမ်မှ တာဝန်ယူလေ့ရှိသော်လည်း ကျောင်းသားများအနေဖြင့် WESLI မှ ထိုအိမ်သို့ နေ့လည်စာအမြဲ ပြန်စားနိုင်ခြင်းမရှိတတ်သောကြောင့် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ၁၀၀ခန့် အစားအသောက်အတွက် ဆောင်ထားသင့်ပါသည်။
STUDENT (F-1) VISA: ကျောင်းသားဗီဇာ (F-1):
အမေရိကန်တွင် ကျောင်းတက်မည်ဆိုပါက ကျောင်းသားဗီဇာရရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျောင်းသားဗီဇာဖြင့် အချိန်ပြည့်ကျောင်းတက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်တွင် တရားဝင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန် ကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်း အချိန်ပြည့် တက်ရောက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပြည့် English သင်တန်း ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး ၁၈နာရီ၊ WESLI တွင်တက်ရောက်သည့် အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားသည် တစ်ပတ်လျှင် နာရီ ၂၀ တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
I-20 သည် အမေရိကန်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ သင့်အားကျောင်းဝင်ခွင့်လက်ခံလိုက်ကြောင်းပြရသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ WESLI သည် ပြည်နယ်ဥပဒေနှင့်အညီ အမေရိကန်တွင် ကျောင်းတက်လိုသော ကျောင်းသားများကို သာ ၀င်ခွင့်ပြုသော ကျောင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်တွင်ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် မိမိလျှောက်ထားသောတက္ကသိုလ်မှ လက်ခံကြောင်း၊ အချိန်ပြည့်သင်တန်းအတွက် သင်တန်းကြေးပေးပြီးကြောင်း တစ်လသက်တမ်းထက် မကျော်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုဖော်ပြပေးရမည်။
*F-1 ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားမည့်သူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း၃မျိုးလုံးကို ကျောင်းဝင်ခွင့်လက်ခံသည့် စာရွက်စာတမ်းများမထုတ်ပေးမီ ပေးပို့ပေးရမည်။
သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို WESLI ၏ ၀က်ဆိုက် (www.wesli.com)တွင် ဖြည့်စွက်ပြီး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ပူးတွဲပါသင်တန်းလျှောက်လွှာကို အီးမေးလ် (သို့မဟုတ်) ဖက်စ်ဖြင့်လည်းပေးပို့နိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာကြေး ဒေါ်လာ ၁၀၀ကို Credit Card (Visa သို့မဟုတ် Master ကဒ်) (သို့မဟုတ်) ငွေလွှဲ (သို့မဟုတ်) အမေရိကန်ရှိဘဏ်တွင် ငွေစာရင်းဖွင့်ထားသူ၏ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ဖက်စ်(သို့မဟုတ်) အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်း အသုံးပြုရမည့် ကျောင်းစာရိတ်နှင့် နေထိုင်စားသောက်စားရိတ်များအတွက် လုံလောက်သော ငွေကြေးပမာဏရှိကြောင်း အထောက်အထားပြနိုင်ရန် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများမှ တစ်ခုကို ပေးပို့ပေးရပါမည်။
က ။ လျှောက်ထားသူ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်းမိတ္တူ
ခ ။ လျှောက်ထားသူ၏ မိဘ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းတက်ရန် အထောက်အပံ့ပေးမည့်သူ၏ ဘဏ်စာရင်းမိတ္တူ (အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကျောင်းတက်နေစဉ် ထောက်ပံ့မည်ဟု သဘောတူထားသောစာ ပါဝင်ရမည်။)
ဂ ။ အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းမှ ပညာသင်ကြားနေစဉ် ကုန်ကျစားရိတ်များကို ကျခံမည့်အကြောင်းရေးသားထားသော စာရွက်စာတမ်း။
I-20 ကို UPS ဖြင့်ရယူလိုပါက ကျောင်းလျှောက်လွှာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော စာပို့ခကို တစ်ပါတည်း ထည့်ပေးရမည်။
အထက်ပါအချက်၃ချက်လုံးကို ပြည့်စုံစွာရရှိပြီးသည်နှင့် I-20 နှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်ဖိတ်ကြားလွှာကို ရုံးဖွင့်ရက် ၂ရက်အတွင်းပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ WESLI တွင်ကျောင်းတက်ရန် ကျောင်းသားတစ်ယောက်သည် အနည်းဆုံး အသက် ၁၇ နှစ်ရှိရပါမည်။ အသက် ၁၇ နှစ်မပြည့်သောကျောင်းသားကို ခြွင်းချက် အခြေအနေဖြင့်သာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားဘက်မှ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ကျောင်းသို့ပေးပို့ပေးရပါမည်။
アラビア語 • ビルマ語 • 中国の(単純化された) • 中国の(漢字) • スペイン語 • フランス語 • ドイツ語 • 日本の • 韓国語 • ポルトガル語 • ロシア • タイで • トルコ語 ベトナム語
19 Nピンクニーセント. マディソン, ウィスコンシン州 53703 米国電話番号: 1-608-257-4300 ファックス: 1-608-257-4346